नायिका Archives - Lokpati.com
Tag - नायिका
नायिका सोनाक्षी सिन्हाको पुत्ला दहन
काठमाडौं, २० साउन। कम समयमा लोकप्रिय बनेकी नायिका हुन् सोनाक्षी सिन्हा। कमै मात्रामा बिवादमा आउँने सोनाक्षी दबंगबाट फिल्मी करिअरमा चम्किएकी हुन्। यतिबेला खासै उत्साहजनक छैन।
उनले आइतबार दिएको एक अन्तरवार्ताको कारण...
‘साइनो’को गीतमा नीताको आइटम डान्स (भिडियाेसहित)
काठमाडौं, ७ साउन । चलचित्र ‘साइनो’को आइटम गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाली चलचित्रकी प्रथम नायिका भुवन थापा चन्दले निर्माण गरेको चलचित्रको ‘क्या वात छ’ बोलको गीत हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।
मीना निरौलाको आवाज रहेको...
प्रेमी राणासँगको ‘चुम्बन’ ले विवादमा तानिइन् साम्राज्ञी
काठमाडौं, ५ साउन। पछिल्लो समय चर्चामा रहिरहने नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने तस्वीरका कारण पनि हंगामा मच्चाउने गर्छिन्। केही समयअघि उनी गोप्य स्थानमा ट्याटु खोपाएका कारण चर्चामा आइन्। पछि...
‘साेचेभन्दा राम्राे रिजल्ट आयो, अब व्यवस्थापन पढ्छु’ : करिश्मा मानन्धर
काठमाडौं, १२ असार । नायिका करिश्मा मानन्धरले एसईईमा ३ जीपीए (बी प्लस) ल्याएपछि खुशी व्यक्त गरेकी छिन् । अब उनले व्यवस्थापन विषय लिएर थप अध्ययन गर्ने बताएकी छिन् ।
उनले दुई विषयमा आफूलाई थोरै शंका लागे पनि नतिजाले आफूलाई निकै...
विप्लवमा लाग्नु के अपराध हाे ? : रेखा थापा
काठमाडौं, १० असार । नेपाली फिल्म मालिका निर्माता नरबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले विप्लव समूहमा लागेर शकांस्पद गतिविधी गरेको आरोपमा सोमबार साँझ पक्राउ गरेको छ।
कार्की नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धीत नेपाल...
अध्यक्षमा किन हारिन् नायिका सरिता लामिछाने ?
काठमाडौं, २६ जेठ । चलचित्र कलाकार संघको १७ औं वार्षिक साधारणसभा र चुनाव सकिएको छ। चुनावमा सरिता लामिछानेलाई ५७ मतले हराउँदै अध्यक्ष चुनिए। सरिता लामिछानेले बलियो साथ पाउँदा पाउँदै पनि हार्नु पर्यो। किन हार्नुपर्यो सरिता...
सिंहदरबार तिम्रा बाबुको बिर्ता होइन : रेखा थापा
काठमाडौं। अभिनेत्री एवं राप्रपा राष्ट्रवादीकी केन्द्रीय सदस्य रेखा थापाले सिंहदरबार कसैका बाबुको बिर्ता नभएको बताएकी छिन्। एनसेललाई कर तिर्न दवाव दिने कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन्।
नागरिक अभियानका तर्फबाट विरोध...
म चिट चोर्दिनँ, अरुकाे कपि हेर्दिनँ : करिश्मा मानन्धर
काठमाडौँ, चैत्र। एसइइ परीक्षामा नेपाली अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर पनि सामेल भएपछि मीडिया र सर्वसाधारणको ध्यान उनीतिर खिचिएको छ। नायिका मानन्धर विजय स्मारक मावि डिल्ली बजार केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछिन्।
के करिश्मा फेरि हिट हुन चाहेकै हुन् त ?
काठमाडौं । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर नेपाली चलचित्र जगतकी हिट नायिकाको रुपमा परिचित छिन् । पछिल्लो समय फिल्म भन्दा नि आफ्नो पढाइमा करिश्माले ध्यान दिइरहेकी थिइन् । बीचमा एउटा गीतमा उनले नृत्य गरेको प्रसङ्गले उनमा फेरि हिट...
माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव